10 Cydia tweaks hanenjanana ny Apple Music (jailbreak) | Avy amin'ny mac aho
10 Cydia nibitsika hanery ny Apple Music (jailbreak)
Applelised | | Apple Music, maro
Efa vitanao ve ny jailbreak amin'ny iPhone na iPad misy ny iOS 8.4? Eny, raha manararaotra ireo telo volana maimaim-poana omen'ny Cupertino anay ianao Apple Music anio izahay no mitondra anao 10 Cydia tweaks izay ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ity serivisy streaming mozika vaovao ity.
1 Jailbreak sy Apple Music, mpivady tsara
1.6 Hely 2
Jailbreak sy Apple Music, mpivady tsara
Vao herinandro lasa izay Apple nanipy iOS 8.4 y Apple Music ary amin'ny tsy misy, ny Jailbreak Ankehitriny azonao atao ny manana ny iPhone na ny iPad araka izay tadiavinao, fotoana tokony hanaovana ny ankamaroan'ny mozika telo volana malalaka ananantsika mialoha antsika noho ny fanampian'ireto 10 tweaks.
Con Jailbreak ary MiniPlayer dia hanana mpilalao mozika mini eo amin'ny efijery an'ny iPhone amin'ny fomban'ny iTunes madio indrindra.
EqualizerEverywhere dia equalizer feno ho anao hanitsiana haingana ny feon'ny anao Apple Music (an'ny mozika amin'ny ankapobeny) avy amin'ny Center Control an'ny iPhone-nao.
MusWitch + JailbreakFampifangaroana mety amin'ny fampidirana fanaraha-maso playback mozika amin'ny multitasking iPhone.
Cydia tweak iray tena tsotra mba hampihetsika ny fihodinana marindrano amin'ny iPhone ary ankafizo Apple Music amin'ny fomba maoderina.
Aspectus dia mamela antsika hanisy fanaraha-maso playback mozika amin'ny iPhone fa amin'ity indray mitoraka ity, ao amin'ny tapany ambony amin'ny efijery rehefa manetsika ny fomba fijery Rechability isika.
Helius 2 amin'ny sioka tsotra izay hananantsika any Cydia aorian'ny fampisehoana azy ireo jailbreak amin'ny iPhone ary ny tanjony dia ny manaingo ny fanaraha-maso multimedia amin'ny fàfana hidin-trano.
Miaraka amin'ilay fiovana Fuse dia afaka jerentsika miaraka ny famantaranandro sy ny fanaraha-maso ny mozika amin'ny efijery hidin'ny iPhone.
Spectral dia manome azy mikitika tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana ny sarin'ny rakikira mozika amin'ny efijery hidin-trano iPhone fa misy vokany kanto. Maimaimpoana ary ianao ihany no mila jailbreak.
"Patch" izay azonao sintonina, ary noforonina mihitsy aza, hanafenana ireo fizarana sy bokotra sasany Apple Music, vokatra mitovy amin'ity fika ity misolo ny Connect with Lists.
Vitanay ireo 10 ireo Cydia tweak naroso hatramin'ny iDownLoadBlog for manatsara ny traikefanao Apple Music noho ny jailbreak miaraka amin'ny ColorFlow, izay hanova ny lokon'ny efijery hidin-trano sy ny fiasa "Ankehitriny milalao".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » 10 Cydia nibitsika hanery ny Apple Music (jailbreak)
Apple Music, ny fiandohan'ny farany ho an'ny Store Storeuneune?